Vaovao - Tsenan'ny fonosana famonosana anjakan'ny fanavaozana
Eo amin'ny tontolon'ny famatarana sy ny vokatra fonosana, ny famoronana sy ny fandrosoana dia mitarika hatrany amin'ny fanavaozana vaovao. Ny sasany amin'ireo fironana farany dia efa nitondra ny tsena tamin'ny tafiotra ary manova ny fomba fanatonan'ireo orinasa ny famonosana sy ny fizotran'ny fandefasana azy ireo.
Tsara homarihina fa ny iray amin'ireo fironana lehibe indrindra nefa dia avy amin'ny fihodinana haingana kokoa ho an'ny endri-javatra mety azo ampiana amin'ny vokatra. Fantatsika rehetra fa ny filan'ny mpanjifa sy ny hevitra lehibe dia mety hipoitra ao an-dohantsika toa tsy misy antony, izay midika matetika fa ny orinasa dia tsy maintsy miasa tsy an-kijanona hanatsara ny fonosana sy ireo fiasa omeny. Ohatra iray amin'izany ny avy amin'i Robert Hogan, talen'ny fampandrosoana orinasa manerantany ho an'ny Zip-Pak. Vao haingana i Hogan no nanambara fa nisy orinasa sasany nampihatra ireo mpanova teknolojia amin'ireo masinina misy azy ireo ankehitriny izay mamela ny fampidirana endri-javatra vaovao ao anatin'ny enina herinandro. Izany dia mahatonga azy io hahatsapa fikorontanana kely ary tsy dia kely akory ny vola ilaina amin'ny famatsiam-bola fanampiny.
Ambonin'izany, endri-javatra malaza tsy mampino iray hafa eo amin'ny tsenan'ny famatsiana fonosana dia ny fahafaha-manao. Mangataka fahafaham-po isaky ny dingana amin'ny fividianana ny mpanjifa. Rehefa afaka manome izany ho an'ny mpividy ny orinasa dia manatsara haingana sy mora ny fanintonana ny marika sy ny vokariny. Raha manao izany dia mitaky ny hananan'ny orinasa sy ny mpanam-bola hampiasa vola bebe kokoa amin'ny fizotran'ny fifidianan'izy ireo, na inona na inona vidiny. Mahita ohatra tsara dia tsara isika ao amin'ny fonosana Giants Sunflower Seeds, izay ahitan'ny sakafo voaaro ao anaty kitapo azy ireo ny sakafo noho ny fisorohana zip-lock manerana ny tampony. Izany dia tsy manampy amin'ny fanatsarana ny fahafaham-pon'ny mpanjifa sy ny fanamorana ny fampiasana azy fotsiny, fa manatsara ny fiainana talantalana ihany koa.
Ny tatitra iray an'ny Research and Markets vao haingana dia nahitana fa singa iray hafa malaza amin'ny fanovana farany nataon'ny indostrialy fonosana dia ny fonosana voajanahary. Ity karazana famatsiana ity dia efa nahita fitomboana ary hitombo hatrany amin'ny lazany, miaraka amin'ny fironana ankapobeny mankany amin'ny fomba fanao maharitra sy mandroso kokoa. Vokatr'izany, mety ho hitantsika fotsiny fa ny fonosana biodegradable dia lasa mpilalao lehibe sy lehibe amin'ny tsenan'ny famatsarana fonosana.
Raha ny zava-misy dia maro ny mpanamboatra manandrana mavitrika hanavahana ny vokariny amin'ireo mpifaninana amin'ny alàlan'ny fanomezana fanatsarana ny fenitry ny indostria efa niorina. Rehefa manohy mampiasa fonosana ho fampitaovana hiarovana sy hampiroborobo ny fiarovana ny tontolo iainana ireo orinasa ireo dia hitombo hatrany ny fangatahana sy ny mety ho fivoarana. Midika izany fa rehefa hihaona amin'ny hetahetan'ny mpanjifa dia ny fanao fonosana biodegradable sy friendly eco no fironana manaraka.